दृष्टिविहीन मान्छेले कस्तो देख्छन् ?
बैशाख ३०, २०७४ शनिवार १८:११:०० प्रकाशित
बिबिसीका पत्रकार डेमोन रोजले बाल्यकालमै आँखाको ज्योति गुमाए । तर, उनको भनाई छ, ‘मेरो संसार अध्याँरो थिएन ।’ आखिर उनी के देख्थे ? पढ्नुहोस्, पत्रकार रोजको अनुभवमा आधारित बिबिसीको यो आलेख :
जब मानिसहरु मलाई सोध्छन्, ‘दृष्टिविहीनतामा तपाईं कुन कुरालाई सबैभन्दा धेरै मिस गर्नुहुन्छ ।’ त्यतिबेला मेरो जवाफ हुन्छ– अध्याँरोको।
म ती मानिसहरुमध्येमा हुँ, जोसंग दृष्टि छैन । म पूरै दृष्टिविहीन व्यक्ति हुँ । ३१ वर्षअघि गलत अपरेशनका कारण मेरो आँखाको ज्योति गुमेको थियो । मेरो दृष्टिविहीन प्रमाणपत्रमा तीन अक्षर लेखिएको थियो– एनएलपी अर्थात् नो लाइट पर्शेप्सन (प्रकाश ग्रहण गर्ने क्षमता नहुनु) । जब तपाईं आँखा बन्द गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर अन्धकारको अनुभव गर्नुहुन्छ ।
यसैगरी, जसको आँखाको ज्योति जान्छ, उसलाई पनि अन्धकारसंग जोडेर हेरिन्छ । के दृष्टिविहीनलाई पनि यसरी हेर्नु सही हो ? पक्कै पनि होइन । अन्धकार या अध्याँरोका बारेमा प्रयोग हुने सबैखालका उपमा या साहित्यिक व्याख्या वास्तवमा सही हुँदैंन, ती कुराहरु सत्यभन्दा कोशौं टाढा हुन्छन् । म के ठान्छु भने म जे देख्छु, त्यो अध्याँरोभन्दा निकै अगाडिको चिज हो ।
थ्रि डी टेक्निकलर दृष्टिको ठाउँ आखिर कुन चिजले लिन सक्छ ? यसको जवाफ हो प्रकाश – धेरै प्रकाश, चमकदार, रंगीन, कहिले परिवर्तन हुने या अक्सर ध्यान भंग गर्ने प्रकाश । मेरो लागि अध्याँरो शान्तिको सूचक हो । जब मैले आँखाको ज्योति गुमाएको थिएँ, त्यतिबेला म चम्किलो रंगको प्रकाशलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ । यसबाट मलाई धेरै आशा जगाएको थियो र म निकै उत्साहित थिएँ । मैले यसलाई गम्भीर भएर विचार गरें । मलाई मेरो दिमागले महसुस गराइरहेको थियो कि अब उसलाई कुनै पनि प्रकारको चित्र प्राप्त हुँदैंन।